Ukujonga Emuva kwi-Nike VR Pro Cavity Irons I-Golf Set
Uhlolo lwe-Nike VR Pro Cavity Irons
I-Nike VR Pro Cavity irons ikhetshi yakhishwa yi- Nike Golf ngo-2011, iqhubeka "i-VR" yayo ye-"Victory Red"). Olu setha luqalise uhlelo lwe-"Opti-Mass" lwenkqubo yokulinganisela kwiintonga zeNike.
I-VR Pro Cavity isetyenziswe ilandelwe kwizithende ze-Nike's VR Pro Combo kunye neVR Pro Blades . Kwaye i-VR Pro Cavity yazibeka yona yagqitywa yi- VR_S i-Covert irons , kwaye emva koko iifom zibeka. I-Nike ayisenzi i-VR Pro Cavity, kodwa ngezinye izihlandlo ungabona ezinye zidweliswe kwi-intanethi.
Oku kulandela ukuhlaziywa kwethu kwasekuqaleni kwe-VR Pro Cavity set, eyakhishwa kuqala ngoMatshi 15, 2011.
Uhlolo: I-Nike VR Pro Cavity Irons
I-Nike VR Pro Cavity irons inikezela umgama ohambelanayo nabadlali be-handicap-middle-middle, ehlanganiswe kwiqela elikhangeleka ngathi lenzelwe abadlali abangcono. Inye yodwa iyanda ukudlala okuvela kwiintlobo ezahlukeneyo zobuxoki kunye namaziko ahlukeneyo adonsela amandla agcina ukukhahlela.
Ukugqithisa isitalelo kubangela ukuzithemba
Ubungqamaniso obunamanqanaba obunzulu bokujonga ubuso beqela
U-Harsher uziva e-mishits
Ukudlala i-Nike VR Pro Cavity Irons
I-Nike yaqhutyelwa kwimibala yegalufa ngo-1996 ephethe i-golfer ephezulu kakhulu yeprofestile ( uyazi ukuba ngubani ). Ukususela ngoko, i- Nike Golf inqobile iindikiti ezininzi kwaye igcina abadlali abaphezulu kwiTyelelo.
Endleleni, i-Nike Golf iye yanikela abadlali abaxhasiweyo kunye neesethi zokuphucula umdlalo. Ngoku, inkampani inomxholo ojoliswe kwi "golfers aspirational" kodwa yenzelwe ukubonakala ngathi yenziwe ngumdlali ongcono.
Ngalo mnikelo, i-Nike VR Pro Cavity irons, i-Nike Golf iye yaqinisa i-VR yayo (i-Victor Red Red) kwaye yenza loo nto, yanceda i-Nike eyongezelelweyo njengegolisa ejoliswe kuwo onke amanqanaba e-golfer. Ipro Pro Cavity yenzelwa umkhuhlane ophakathi phakathi ofuna insimbi ekhangeleka njengentsimbi yomdlali.
Yintoni eyahlukileyo ngohlobo lweVR Pro Cavity? I-Nike ifake inkqubo ye-Opti-Mass. I-Opti-Mass iyinani elingafaniyo le-resin kunye ne-tungsten, efakwe kwi- cavityback , eyongeza ubunzima kunye nokuxhalabisa. I-Opti-Mass ivumela amaziko omnkantsha ukuba ahluke ukusuka kwiblabhu ukuya kwiklabhu ngaphakathi kwiseti, ukuphucula bhetele indlela yokuhamba kunye nokwenza i-gapping eqhubekayo. Inzuzo kubagadi begalufu kukulawula okungcono komgama kunye nomzila olawulwa ngakumbi osekelwe kumsebenzi ofanelekileyo wesinyithi ngasinye - umz., Ukuphakama kweetsimbi ezide kunye neentsimbi ezifutshane.
Ididi edibeneyo yinye yamandla okwenene kule setsimbi. Abahloli bethu, ukusuka kwi-low-to-middle-hand -appersers, bafumana imida ehambelanayo engaqhelekanga eyahlukeneyo kuneeyari ezimbalwa. Kubonakala sengathi i-Nike Golf iye yaqaphela apho abaninzi abagadi begalufu balahlekelwa khona kwaye baqwalasela le mpazamo kwi-makeup yokwenza isethi.
Umgangatho osemgangathweni ngu-4-A. Iinqwelo ezide zineentloko ezi-3 ezivumela ukuba kubekho ubuso obuncitshisiweyo obushushu; Phakathi kweeyunithi zi-2-piece kunye neempotshane ezi-1-piece. Iimpawu zensimbi zensimbi zivela kwisitokhwe se-True Temper sikaDynalite 110, enceda ngokwenene ukufumana ibhola lomoya kwaye lukhetho olugqithiseleyo ngaphezu kwe-Dynamic Gold shaft. (Iifomfa zeGraphite ziyafumaneka kwakhona
Ngakolunye uhlangothi, ngamanye amaxesha ama-mishits evakalelwa unzima ngokwaneleyo ukwenzela abanye abavavanya ingxaki nokuba ngaba iqela lixolela . Noko ke, imida yayingcono kunomyinge, kwaye njengoko sele iphawulwe, iyavumelana.
Nangona i-Nike VR Pro Cavity irons ihambelana nomgama kwaye inezinto ezithile ezintle, isethi ayizange ifake iqela lethu labahloli. Omnye umdlali ophakathi kwendawo yokukhubazeka wathi, "Ndicinga ukuba i-Nike ilahlekile into apha, kodwa andiqinisekanga ukuba yintoni." Uyilo lusekelwe kwisakheko esihle (kunye nesigxina) isetyenzisiweyo sePro Probo. Inayo inzala yeVR kwaye ikhupha ibonakale kwiklabhu engcono.
Isigwebo sokugqibela siphume, kwaye siya kuxhomekeka kwindlela umqhubi webhola osebenza ngayo udlala iVR Pro Cavity. Kodwa i-Nike VR Pro Cavity irons inikezela abo basebenzayo ukungena kumgangatho ophantsi okhubazekileyo kunye nokulawulwa kwendlela yokuhamba, kunye naloo nto, ithemba lokusondeza kwiphina.
I-Callaway X-Tour Iron: I-Premium Premium yeNkampani, i-Forged Set
Gcwalisa i-Skateboard Yokuthenga Isikhokelo
IYunivesithi yaseCincinnati Admissions
Ukuqonda amaHluma ahlukeneyo Amanzi Amanzi
Excel SIGN Umsebenzi
Umbulali obulalayo uJerry Brudos
Ixesha elingakanani Umoya kwiTanki yeScuba yokugqibela?
I-Embry-Riddle University ye-Aeronautical GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Amagama aseJamani amnandi kwiNja yakho okanye kwiNkatha
Inkcazo yeLede echithwe - Ababhali abasebenzisa njani ukusebenzisa iiLedes ezidlulileyo
Ukuboniswa kweBattery Ukubonakalisa
I-Homology vs. Homoplasy kwiNzululwazi yeNzululwazi
I-8 Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Msebenzi